Haisoratra · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Haisoratra · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Haisoratra tamin'ny Marsa, 2018
Maraoka: Mifanakalo Hevitra Amin'ny Lova Napetraky ny Malalaka Fisaina Iray
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Marsa 2018
Voamarika kely tao amin'ny fampitam-baovao ny fahafatesan'ilay Maraokana filôzôfy sady mpanao teoria sosialy iray antsoina hoe Mohammed Abed al-Jabri. Nefa mifandraika indrindra amin'ny fotoana ankehitriny ny fandraisana anjaran'i al-Jabri manoloana ny fifandonan'ny rafi-pisainana (rationalité) sy ny fomba fisaina ara-pivavahana (pensée relisieuse).
Sri Lanka : Ho Fahatsiarovana An'i Arthur C Clarke
Azia Atsimo26 Marsa 2018
Nahakasika olona maro ny fahafatesan'i Arthur C. Clarke (1917 - 2008) - misy ireo tena mpankafy tantara foronina momba ny siansa (science fiction), ary ao koa ireo hafa izay nahafantatra azy fahavelony namoaka tanaty blaogy ny fahitàny ilay rangahy. Manomboka amin'ny fomba fijery tsotsotra ka hatramin'ny adihevitra hafahafa, tena tsaroan'ireo...
Andro Iraisam-pirenena Ho An'ny Tononkalo, Andininy Sasany Avy Ao Am-pon'i Persia
Azia Afovoany sy Kaokazy23 Marsa 2018
"Ny alahelo ato am-poko, dia tahaka ny tendrombohitra/Ny fo eo ambanin'ny tratranao, tahaka ny vato."
“Afrika sy ny Tononkalom-baovao”: Nanao Karajia Twitter Ho An'ny Tononkalo Manerantany Ny Global Voices
Afrika Mainty22 Marsa 2018
Ho fankalazana ny Andro Manerantany ho an'ny Tononkalo ny 21 Martsa 2018, hampiantrano fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Twitter momba ny lohahevitra "Afrika sy Tononkalom-baovao" ny ekipan'ny Global Voices atsimon'i Sahara.
Syria21 Marsa 2018
Izany indrindra ny fomba nisintonany ny volony izay nambabo ahy tanteraka ....
Fandalinana Boky: Antsafa Niarahana Tamin'I Roy Moxham
Azia Atsimo06 Marsa 2018
Omem-boninahitra Ny Olona Any Armenia Rehefa Manana Voromailala Tsara
Azia Afovoany sy Kaokazy06 Marsa 2018
Mandritra ny herinandro vitsivitsy ny fifaninanana, ary samy manana ny andro hanidinany ny voromailala tsirairay .
Rakipeo Fandalinana Boky: Fisaka Ny Tany
Hevitra04 Marsa 2018
Fandalinana ny Bokin'i Thomas Friedman "Fisaka ny Tany."